Maka: i-google adwords | Martech Zone
Maka: google adwords
Njengoba siqhubeka nokuxhumanisa imikhankaso yeziteshi eziningi eyinkimbinkimbi yamanye amaklayenti ethu, kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi ucingo lukhala nini futhi ngani. Ungangeza imicimbi ngezinombolo zefoni ezixhumene ukuqapha izibalo zokuchofoza ukuze ushayele, kepha imvamisa lokho akunakwenzeka. Isixazululo ukusebenzisa ukulandelela izingcingo futhi ukuhlanganise ne-analytics yakho ukubona ukuthi amathemba aphendula kanjani ngezingcingo. Izindlela ezinembe kakhulu ukukhiqiza ifoni ngamandla
Njengomkhangisi, umnyombo wemizamo yethu uzama ukuthi izinhlelo zokuthengisa, ukumaketha, nezokukhangisa esizithathile ukuhambisa amathemba ethu ohambweni lwamakhasimende. Amakhasimende alindelekile cishe awalokothi alandele indlela ehlanzekile ngokuguqulwa, noma kunjalo, noma ngabe isimanga sikhulu kanjani. Uma kukhulunywa ngokukhangisa, noma kunjalo, izindleko zokuthengwa zingabiza kakhulu… ngakho-ke siyethemba ukuzicindezela ukuze sikwazi ukubona nokuthuthukisa imiphumela yethu yomkhankaso. A
I-Infographic: Amasu Amasha Avelayo Ukushayela Ukukhula Kokuthengisa Ngezikhangiso zeGoogle
NgoLwesibili, ngo-Mashi 31, i-2020 NgoLwesibili, ngo-Mashi 31, i-2020 Douglas Karr
Esifundweni sayo sesine saminyaka yonke ngokusebenza kwemboni yezokuthengisa ku-Google Ads, uSidecar uncoma ukuthi abathengisi be-e-commerce bacabangisise amasu abo futhi bathole isikhala esimhlophe. Le nkampani ishicilele ucwaningo embikweni wayo we-2020 Benchmarks Report: Google Ads in Retail, isifundo esiphelele ngokusebenza komkhakha wezentengiso kuzikhangiso zeGoogle. Ukutholwa kukaSidecar kukhombisa izifundo ezisemqoka ezidingidwa ngabathengisi kulo lonke u-2020, ikakhulukazi phakathi kwendawo enoketshezi eyenziwe ukuqubuka kwe-COVID-19. U-2019 ubencintisana kakhulu kunanini ngaphambili,